9 Bilyan 873 Milyan Liras Ayaa Maalgaliyey Istaraatka Magaalada Istanbul (Warar Gaar Ah) | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 Istanbul9 Billion 873 Milyan Lound Investments ayaa lagu sameeyey Istanbul (Warar gaar ah)
9 Billion 873 Milyan Lound Investments ayaa lagu sameeyey Istanbul (Warar gaar ah)
18 / 08 / 2012 34 Istanbul, News Exclusive, DUNIDA, GUUD, Headline, TURKEY
Istanbul degmada Metropolitan, furay August 17 ah, Ra'iisul-wasaare Recep Tayyip Erdogan ka dhigi doonaa baabuur la wada 1.5 bilyan oo dollar, 22 kiiloomitir metro Kadikoy-Kartal waayo, maalintii tirinta, 2015 hadda iyo sanadka la dhismaha line socda bandhigay caga rail in wadarta kiiloomitir 230 . 2023, waxaa looga golleeyahay in lagu gaaro wadarta isku xirka wadada 641 kilomitir dheer.
QIIMEYNTA HORUMARKA SANADKA SANADKA SANADKA
Inta lagu guda jiro muddada duqa magaalada Istanbul ee caasimadda Kadir Topbas, wadarta xawaaladaha 9 MONNESX million pounds ayaa lagu maalgeliyay tareenka. Qadarka maalgelinta nidaamka tiknoolajiyadda socda ayaa ah 873 million pounds. 741 dhererka nidaamka tareenka 2004, halka rakibida maalinlaha ee 45.1 kun qof, 402 dhererka nidaamka tareenka ayaa gaaray 2012. Awoodda rakaabka maalinlaha ah ayaa sidoo kale kordhay malaayiin million 102.7 kun. Tiradani waxay gaari doontaa 1 million 347 kun iyada oo leh 1 million 288 oo ah rakibayaal maalinle ah oo rakaab ah oo ku yaalla Kadikoy-Kartal Metro. Sanadkii la soo dhaafay, dhulka hoostiisa ku 2 635 kilomitir oo dherer ah, oo muujinaya ka badan boqolkiiba kororka 8 in awoodda rakaabka maalin kasta 57.6 128 kun oo qof kor u kordheen boqolkiiba 820.
MAGAALADA BADBAADADA SHAQADA MAGAALADA
Waxaa jira xarun 22 oo ku taalla Kadikoy-Kartal Metro kaas oo leh dhererka 16 ee la furayo. Dhismaha xariiqda laga soo galo Kaalmo ilaa Pendik Kaynarca, mitirka 150 ayaa maalin walba la duuduubay, Tunnida ugu dhaqsaha badan ayaa laga furay magaalada. Shaqooyinka farsamada yaryar iyo kuwa ganaaxa ayaa ka bilaabmay xarunta 15 iyo habka rikoodhka tareenka u dhexeeya Kozyatağı-Kartal oo la dhameeyay iyo qalabka 250 ee lagu rakibay maalintii.
Tirada guud ee baabuurta la dhigo xariiqda, oo dhererkeedu dhan yahay 48 kun 572, waxaa laga soo qaaday 120 ilaa 144 sababtoo ah kordhinta xariiqda Kaynarca. Xagasha 4 waxay haystaan ​​awood rakaab ah oo kun oo kun ah 84 iyo 8 baabuurta wata awood ay leeyihiin 2 kun 168. Xaqiiqdii, waxa suurtagal ahayd in la qaado rakaab badan oo leh wacyigelin heer sare ah.
KARTAL - OLYMPIC STAD 89 MINUTES
Marmaray la line metro Kadikoy-Kartal, marka Yenikapi-Hacıosman iyo Bus Station-Bagcilar-Ikitelli Lines waa complete, rakaabka ah ee raaca tareenka ka daqiiqo Eagle Kadıköy 29 Üsküdar'a 35 daqiiqo Yenikapı 47 daqiiqo Taksim 55 in daqiiqo , Saldhigga basaska 66, daqiiqadaha HACIUMX 79, Garoonka Ataturk Airport 79, daqiiqado Olympic Stadium 89 ayaa la gaari karaa.
WAXAA LAGA DIIDO MARMARAY
Mitirka 174.7 ee xadka tareenka ee hadda jira, oo ah 102.7 kilomitir Istanbul, wuxuu leeyahay nidaamyada tareenada IMM iyo mileada 72 waxaa iska leh TCDD Commuter Line. Metropolitan ayaa sii wadi doonta dhismaha nidaamka xadiidka 50.45 kilomitir. Dhererka 13.5 kilomitir TCDD ee xuduudaha xNUMX ayaa la kordhin doonaa ilaa 63.5 waxaana loo badali doonaa Marmaray iyadoo la marin doona tubta 77 ee tubada dhererka dheer ee mashruuca Marmaray.
Dhamaan xarumaha kale ee tareenada ee Istanbul waa sida soo socota:
Qalabka 65.5 ee nidaamka tareenada ee dhererka mashruuca codsiga.
Mashruuca mashruuca wadada socdaalka wadada joogtada ah ee xNUMX.
Dhererka wadada tareenada ee sahanka iyo qorshaha waa wareegga 321.1.
Length of nidaamka tareenka ayaa bilaabaya 66 km ee hannaanka hindisada.
Istanbul degmada Metropolitan System Rail in qaabka barnaamijka qaadeen Madaxtooyada, 17 Friday, August, kuwaas oo bilaabi doona marka xigta Kadikoy-Kartal metro, taas oo aan fidin doonaa inuu mashruuca hoostiisa 4.5 kiiloomitir Kaynarca sii diyaar curdan tahay.
Saldhigga Baska- Bağcılar (Kirazlı) Nidaamka Tareenka Fudud: 5.8 dherer, dhisme ah.
Bağcılar (Kirazlı) - İkitelli-Başakşehir Metro: dhererka 15.9, socodsiinta tijaabada ayaa la sameeyaa.
Şişhane-Yenikapı Metro (Isgoyska Haliç Bridge) oo ay ka mid yihiin: dhererkiisu yahay 3.5 kiiloomitir, shaqooyinka dhismaha ayaa socda.
Aksaray -Yenikapı Nidaamka Tareenka Fudud: 0.7 waa kiiloomitir oo dherer ah, marxalad da 'ah.
Üsküdar-ümraniye-Çekmeköy Subway: Dhererka kiiloomitir 20 kiiloo mitir, dhisme ayaa socda.
Kabataş-Mahmutbey Metro: dhererka 24.5, Modelka wareejinta-Operation ayaa la filayaa inuu ansixiyo Golaha Qorsheynta Sare.
p style = "text-align: center;">
p style = ”qoraalka-toosinta: sax;”> Source: News
Meelmarintii ugu horreysay ee soo saaridda Ankara Metro waxaa loo wareejiyay 2012 iyada oo loogu talagalay 1.5 bilyan ginni kaynak
Kaydinta 30 Milyan Lira BursaRay iyada oo 150 baabuur oo laga soo iibsaday Holland…
Tareenka Investment 137 bilyan 500 million Yasar Kutluay dalka Turkiga
Maalgelinta 3 waxaa la qorsheeyey in lagu maalgaliyo 20 Milyan Liras sanadkiiba
Wasiir ku xigeenkii hore: 7 miisaan lacageed oo loogu talagalay mashruuca 55 ayaa maal gashaday
Wasiirka Elver: 11 Xili ugu dambeysay waxaanu ku biiray 20 Milyan Liras on Railways
Wasiir Arslan: "Magaca Waddanka iyo Gaaritaanka Waddanka 14-kii sano ee la soo dhaafay…
15 2,4 Milyan amaah ah oo loogu talagalay maalgelinta istiraatiijiga ah ee loo yaqaan "Railway Electrification"
Laydhka 'TCDD': 2 Bilyan 558 Milyan Lira oo Lumiya Hal sano gudaheed
3 Billion 650 Milyan Lira 'Guarantee' Lacagaha Mashruuca Mega
2013 Billion Lira dhamaadka 28.4
1,8 Milyan Liras oo loo Isticmaalayo Maalgashiga Tiknolojiyada Sare
2015 bilyan oo liras maalgashiga tareenada ee 9
2019 oo ku qarash gareynaya 3,5 Milyan Liras oo ah Maalgashiga Tiknolojiyada Sare
Miisaaniyadda 2017 ee Metropolitan Municipality of Izmir 4 bilyan 950 million pounds
Khadadka khadka Kadalköy-Kartal ee leh Marmaray
CAF oo ka socota Ankara oo ciriiri raacday ayaa diiday racfaan
Gaadiidka Gaadiidka ee Gaadiidka Baasuuke
Maanta Taariikhda: 26 Feebarwari 1913 Dawladdii Cusmaaniyiinta…